Tani waa goobta shukaansi ah, iyo goobta shukaansi ee xayawaanka ku caashaqay ah, aan ka yarayn. Sidaas awgeed, waxaan ka hadli karaa kaliya daqiiqad ku saabsan eeyaha dhaddig? Oo waxaan ula jeedaa “eeyaha dumar ah” in dareenka ugu euphemistic, sida aan la xidhiidho canines, laakiin dadka dhiggooda ah noocyada aadanaha in siinayaa dumar ah eeyaha magacooda xun. Laakiin maxaa yeelay sidaas waxaa goobta SFW ah iyo in dadaal lagu doonayo in dib u siin in ay eeyaha dumar ah ixtiraam iyo waxay jecel yihiin u qalmaan-aan ka hadalno halkii ku saabsan Bees axdiga jebiya Queen (ama HQBs) iyo nimankii u jeclahay, iyo waxa uu jiro si ay u bartaan iyaga ka si ay u xiriirka noo gaar fiican.
Time iyo mar mar, Waxaan ahaa markhaati u gacan koowaad ah in arrin ku saabsan “nin fiican jecel yahay HQB”. Waa wax yaab leh runtii bal eeg-a daryeelka, nooc kaakala, nin edeb leh iyo ajiir wanaagsan oo u muuqata in ay mar walba noqon in jagada loo foorarsado ka badan gadaal uu HQB; iyo waxa ay u muuqataa in ay sidoo kale jeclahay daqiiqad kasta oo ka jawaabaya dalabaadka iyada oo sita culusi ay ka iyada iskama aan kala sooc lahayn. Laakiin xiriirka kuwaas oo sidoo kale qaar ka mid ah ugu wanaagsan ee aan arko marka la eego socdeyba; iyo si aad u, Waxaan ogaan, marka la eego degree qaar ka mid ah guulaha xiriir.
Sidaas waxa aan awoodno, sida hufan, Haweenka fikir ka bartaan HQBs in uu soo jiito oo sii nooca ragga ay u muuqda inay wax dhib ah uma soo jiitay iyo haysashada?
1) HQBs waxay leeyihiin dareen xoogan oo leh aqoonsi
HQBs ogaado cidda ay yihiin iyo waxa ay doonayaan. Iyagu way og waxa ay keenaan miiska iyo inay yihiin xiiso leh maxaa yeelay danaha ay tahay iyaga u gaar ah oo laga yaabaa inay u gaar ah ka danahooda wehelkaaga. Waxaa lagu caajiso in aad naftaada taariikhda, iyo HQBs ayaa is tusay tan.
2) HQBs leeyihiin amarka ay aduunka
HQB An u muuqataa in ay amarka dunida ka hareereeya (hadday run ahaantii ama ma). tayada Tani boost a dago in ay ninkeeda waxay bixiyaan ego-haddii waxa uu leeyahay qaar ka mid ah gacanta ku samaynta iyada ku faraxsan, waxayna Leedahay gacanta ku “Adduunka”, waxa uu leeyahay control of “Adduunka” by wakiil. Waa in oo dhan “haddii A = B iyo B = C, markaas A = C” shay. Sidee this turjumi tip a faa'iido leh? Decent, dad maskax leh aniga iyo adiga u muuqdaan sida in aanay noqon mid aad u adayg leh falalka iyo isgaarsiinta our. In hal adayg badan waa ka duwan yahay isagoo dagaal, taas oo M.O aasaasiga ah. ee HQB celcelis ahaan iyo waa waxa uu siinayaa in xanuunsan-ka heleen, control aan xasiloonayn ee “Adduunka”. Laakiin in ay ka badan hal adayg dhali doonaa amarka weyn oo aad dunida, oo aan natiijada si kale xun ee gardarada. Mid ka mid ah tusaale ahaan of this si fudud waa in aad sheegtid waxa aad rabtid iyo sababta ay ka aragti macno, sans la yaso ee, xanaaq saxsanaanta, inta badan oo shaqeeya samaynta codsiyada la mid ah oo ay HQBs.
3) Mar walba oo caan ah oo la xaqiijiyay, “Ragga Like Challenge ah”!
Sidee articles shukaansi badan iyo buugaag ay leeyihiin waxaad ka akhrisan in u heelan yihiin inay version qaar ka mid ah fikrad asaasiga ah in ragga jecel yihiin in ay la soo bandhigay caqabado hor leh, si ay u dareemaan dheeri oo gaar ah marka ay awoodaan inay qabsadaan, tartan sheegay in ay yihiin? Laakiin, isu, ka hadli doonaan helo naagtii more baxsanaya more soo jiidasho badan kan buugga furan mar walba la heli karo-. Mararka qaarkood teedu elusiveness as-sidee baan odhan-isagoo yar bakhayli la muujiyey nooc kasta oo dareen wanaagsan ama warcelin (taas oo ah meesha HQBs soo galo). Ragga qaarkood ma iska caabin ah kartaa caqabad ku ah isku dayaya in ay sharci darrada ah nooc kasta oo jawaab wacan ka HQB ah iyo si ay noqotaa shay oo xiiso weyn.
Sidee aadan (mar kale, sida hufan ee, Haweeney maskax aad tahay) jeesatoba galay isagoo mid xiiso badan? Tani waxay si fudud u noqon kartaa disingenuous ciyaar in buugaagta sida “Xeerarka” (Fein iyo Schneider) dhan, taas oo laga yaabaa in aan shaqeeyo qof kasta oo aad ka tagto waxaa laga yaabaa xanuunsan-dareen iyo jahwareer ku saabsan wixii aad odhan lahaydeen iyo marka. Halkii, la dhiso ilaa noloshaada in ay si dhab ah oo buuxa iyo aad u xiiso badan qaadashada caqabad run in hoos ku kawin taariikh leh. Ma aha oo kaliya waxa ay hubin doonaan off dhan in “noqon caqabad ku ah” Nuguma habboona in si ungracefully lagu tilmaamay HQBs (in ragga aad si soo jiidasho), laakiin taariikhda dareemi doono in ka badan ayaa lagu qiimeeyaa marka aad sameeyey dhibic si ay waqti si cad u qiimo badan u huri isaga la.
4) Kulan No
Waxaa marba marka ka ragga joojiyo jawaabaya murmin xaalkooda kulan-haddii tani ay tahay oo ay xambaarsan kuwa ka yar a qaan isagoo, ama xiriir laftiisa isagoo koray ka baxsan ay flirtation hore. Waxaa laga yaabaa in tip this lagu yaraan qayb ahaan xisaabsan kartaa "socdeyba" oo dhan logu soo bandhigay by / xidhiidhka Guy Nice HQB. HQBs dhihi waxa ay doonayaan, oo markii ay u rabto. Waxaa jira kulan dhawr iyo intangibles ka qabashada HQB ah, iyo rag badan ka heli cabdo this. Tani waxay xiriir in xubno ka labo ka mid ah hore talooyin-in isagoo sahlan oo aad isgaarsiinta (I.E. isagoo xaqaagii), oo aad u cad waxa aad dooni ka lamaanahaaga haddii uusan hore u bixinta, aad soo bandhigay ah tartan in uu u badan tahay raaxaysan doonaa galinayso in ay la kulmaan, sababtoo ah waxaa suurowda inaad si cad oo uu dadaalka uu noqon doonaa in aan waxtar lahayn ma cabsan doono,.
Sidaas, Kind Hearts-qaadan wadnaha, iyo taladan si wadnaha-iyo malaha aan sheegan kartaa qayb yar oo ka weyn oo ka mid ah suuqa Nice Guy nafteena!